Olexandr Gladkiy akusiwona okwamanje amathathu, kodwa wakwazi ukudlala cishe zonke nemishiza sivela phezulu etafuleni Ukrainian Premier League. Ngokwezinga elithile, lesi simo, ngoba ngokomlando phakathi amaqembu amaningi ubuhlobo ngingakhululeki, ngakho anqume ngalolo shintsho ngezinye izikhathi oh yeka ukuthi kunzima.
Gladkiy Aleksandr Nikolaevich - football player, okuphila kwakhe kanye nezemidlalo indlela iqala Kharkiv. Ukuba esikoleni enamandla wendawo "Metalist", umgadli akuveza yazibiza e "Arsenal" futhi bangena ezinhlwini FC "Kharkiv". Merit Umgadli yaqashelwa futhi ngokulambisa safinyelela engamashumi amabili, u-Alexander salandelwa debutant Premier League kwelinye "beyizinsika" ubuqhawe - IDonetsk "Shakhtar".
I ke Umqeqeshi yabavukuzi, Mircea Lucescu, akazange anqikaze ukusabalalisa guy kwentuthuko. Ithi, ethanda ukuzilolonga, esheshayo, futhi ifundeka kanje umdlalo kahle, has a scorer ukuhlukanisa. Futhi Aleksandr Gladky ngokushesha babeka nezaba ukuzethemba, kusukela lokushaya cishe kuwo wonke umdlalo. Isiqongo sokuhlala kwakhe iminyaka emithathu e-IDonetsk team kungenziwa ngokuthi ukufana ngokumelene Catalan "Barcelona". Khona-ke phambili bezinsizwa umbukwane wangempela, futhi basiza iqembu uwine kokunqoba Champions League, futhi ngemva - ayinqobe zokugcina UEFA Cup.
Kuyo yonke le minyaka, uMnu Lucescu ekilabhini isibe ezingasho ithemba aseRoma. Umgadli Ukrainian akamsizanga, ngisho umkhawulo kuqhathaniswa eqinile nakho ngeke kusize ku abadlali lesinye isizwe, futhi ngemva shintsho, "Umvukuzi" kule scheme striker eyodwa Aleksandr Gladky futhi uba ayilitholi ku uhlelo kokuqala. Akumangazi ukuthi umdlali bavumelana ngokushesha emigomeni kancane ezikhangayo futhi ushintsho yokuhlala ukuze laseDnepropetrovsk.
Ngaleso sikhathi, Smooth wakwazi ukuthola isizinda kuleli eqenjini lesizwe Ukraine, ngakho-ke lokhu Umgadli ekilasini bekulokhu iyisibusiso sangempela Bessonova ithimba. Nokho, ngokushesha kwaba sobala ukuthi umvuthwandaba wawo Umgadli sesiphumile, futhi ngemva zonyaka ezimbili ezalandela ngokuqashisa e Lviv "Karpaty". Cishe kanye Umgadli esesabekayo okuthiwa Alexander Smooth ukhohlwe ngokukhulu ukushesha yephukela ngokushesha leyo ibhola Ukraine.
E Lviv, ezingeni lokuhlasela umdlalo futhi wakhuphukela. Ukuze zonyaka ezintathu yonke imincintiswano, ephawula izikhathi 19 e umgomo abaphikisi sika (kwesigamu olungena on rally yokugcina). Uma ucabanga ukuthi ukuthola izikhundla eliphakeme e Lviv ithimba akazange alwe, luwumphumela ezinhle kakhulu. On bushelelezi futhi yagxila IDonetsk "Shakhtar", ngubani nje ahlukana ngalo lezinkanyezi Eduardo Brazilian futhi abhekene nezikhathi kanzima kulokhu kuhlasela. Sezadlula ezinye izingxoxo futhi izisebenzi zasemayini isisetshenziswa esemthethweni ngaso inombolo 21 futhi sasitholakala Gladkiy Aleksandr. Ibhola umdlali idlalwe nge bang futhi futhi umxhwele ngenkathi kuqala. Yize Lucescu namanje baseBrazil kulokhu kuhlasela omethembayo ngaphezulu, Smooth waphawula e umgomo abaphikisi sika izikhathi nanye 19 okufanayo.
Ekhuluma ewukuhlakanipha entsha
Lucescu inkathi e "Shakhtar" usezofika ekupheleni, futhi kwaba sobala ukuthi awavamile enkundleni kule sizini 2015-2016 Aleksandr Gladky ehlobo waphinda uzothatha indawo ka yokubhalisa football. inkontileka yakhe yisikhathi, ngakho-ke, ukuya Umgadli omusha club ayengakwenza isimo enenkululeko, okungukuthi khulula. Sasiyini ukumangala omphakathi, lapho le club kwaba abaphikisi oyinhloko yabavukuzi - Kiev "Dynamo". Kuze kube manje, lo mgadli ufaneleke ukwesaba abagxeki, ngoba kuyaqabukela kubonakala enkundleni, futhi ongakabi kukora emidlalweni olusemthethweni. Nokho, kubonakala sengathi, umqeqeshi ikhanda Sergei Rebrov uyaqhubeka ukwethemba footballer, futhi ngaleyo ndlela konke ezandleni zakhe.
Yini sedatives ezinhle?
Yini hepatologist awukudla? Hepatology - igatsha lomuthi etadisha isibindi, gallbladder, ipheshana biliary